Ngaba ubone nje 911? Ubukhokelwa apha ukuba ufumane malunga nentsingiselo ye-911 kwaye kutheni le nombolo enamanani ama-3 ibonisa ebomini bakho.
Ukubona i-911, kaninzi-njalo, ayisiyiyo nje into eyenzeka ngamabona-ndenzile njengoko unokucinga. Akukho nto kwi-Universe engahleliwe. Oku kukuhambelana. Into ephindaphindayo ngumqondiso-umyalezo ofuna ukutsala umdla wakho-Kwayengokukodwa ukuba yipateni yamanani okanye ulandelelwano lwamanani, anje nge-111, 0000 okanye kwa-9: 11. Uyavuka kwaye wahlukane neendlela zokucinga ze-egocentric. Uyayiqonda into yokuba unako ukwenza ngaphezulu kunamava obomi bakho.
Indalo iphela ihlala inxibelelana nathi, kodwa ayinguye wonke umntu onobuntununtunu ngokwaneleyo okanye aqonde ukuqonda loo miyalezo kwaye aqonde neentsingiselo. Isizathu sokubona i-911ngokuphindaphindiweyokukuba kukho into ekufuneka uyihoye, umyalezo okhethekileyo kuwe ovela kwiNdalo iphela kunye neqela lakho lezithunywa zezulu kunye nezikhokelo zomoya.
Gcina ukhumbula ukuba kukho iintsingiselo ezininzi zenombolo 911. Ukukunceda ukukhokela, nazi iintsingiselo zokomoya ezisi-911 kunye nezizathu zokuba uqhubeka ubona i-911 okanye i-9: 11 kuyo yonke indawo ngeli xesha lobomi bakho. Emva kokudlula nganye nganye, zama ukubona ukuba yeyiphi eyona nto ihambelana nawe kakhulu kwaye inokukunceda ukuba uqonde injongo yomphefumlo wakho.
Intsingiselo yokuqala ye-911: Ukufudukela kwinqanaba eliPhezulu loNgcono.
Nangona sinokuthi sidibanise i-911 kunye nongxamiseko, kunye nengozi enokubakho okanye into embi, ingelosi inombolo 911 idlulisela intsingiselo eyahlukileyo. Esona sizathu sibalulekileyo sokubona i-911 ngale ndlela kukuba ufumene inqanaba eliphezulu lokwazisa okanye sele uza kuthi. Uqala i-adventure enkulu ebomini bakho, kuba, awusaziphileli kodwa uphilela into enkulu kunawe.
Ngenkalipho nokuzingisa, uyakholelwa kuwe. Ukhetha ukukholelwa ukuba unokwenza nantoni na obeka kuyo ingqondo yakho. Kwaye uyazi ukuba le yinyani. Uyaqonda ukuba awufani neziphiwo ezikhethekileyo kunye neetalente. Uqala ukwenza kwiminqweno yakho. Ukuba unokucinga, ungayenza. Amasango aqala ukuvula, kwaye uMhlaba uphela wenza iyelenqe lokukunceda ngomnqweno wakho. Nje ukuba uthathe inyathelo, yonke into oyifunayo ikukhangela . Uqala ukuqonda ukuba zonke iimpendulo ozifunayo zifumaneka ngokwenene ngaphakathi kuwe, kwaye xa uyiqonda kakuhle le nyaniso, indalo iphela izisa kuwe izimvo nabantu ofuna ukuba baphumeze umsebenzi wakho.
Njengenani leengelosi, i-911 imalunga nokulungela ukukhanyisa umhlaba okujikelezileyo ngokukhanya kwakho kukaThixo. Ukulungele ukukhula kwaye wandise ngokomoya kwaye le ndlela intsha yokuqonda iya kukuzisela injongo ebomini. Uthatha inyathelo elikushukumiselayo usiya kwicala leyona nto uyinqwenelayo, kwaye ubomi buqala ukuhamba ukulungeleka kwakho. Indalo iphela iya kukukhokelela kwiimpendulo njengoko uthatha inyathelo kufutshane nesiqu sakho sokwenyani.
Uthatha isigqibo sokukhulula imikhwa yakudala kwaye ukhethe iindlela ezingcono zokuchitha ixesha lakho ukuze wenze umlinganiswa wakho omtsha oxhasa isiqu sakho sokwenene kunye noMhlaba.
Lixesha lokuba uthathe ivili kwaye ube ngumphathi wenqanawa yakho. Yenza amaza kwaye wenze amaqhuqhuva ngaphandle ukuqala utshintsho olunempembelelo entle kwilizwe liphela-okanye umntu omnye!
Khumbula oku: 'Into efunekayo ukutshintsha umntu kukutshintsha ukuzazi kwakhe.' - UAbraham Maslow (1908 - 1970)
Intsingiselo yesi-2 yesi-911: Ukulungele ukuqhubela phambili kuMjikelo woLonwabo olandelayo.
Enye intsingiselo ye-911 xa uyibona iphindaphindeka kukukhula. Indalo iphela ikuthumela inqaku lokuba ukulungele ukuya kwinqanaba elilandelayo ebomini bakho. Amavili ayajika kwaye usiya kumjikelo olandelayo wobomi bakho kwaye oku kuthetha ukuba lixesha lokuba uthathe uxanduva olupheleleyo ngokwakho. Oku kunokuthetha ukufunda okanye ukuphuhlisa isakhono esitsha, umkhwa omtsha, umkhwa omtsha, okanye umbono omtsha ngobomi. Ukusuka kwinqanaba lakho elitsha lokuqonda, olu tshintsho luza kuzisa amandla oxolo aza kutsala abantu abafanelekileyo kunye namava okuxhasa umsebenzi wakho. Onke amandla owadingayo ukuze uphumelele kwimishini yakho sele ekhona ngaphakathi kwakho. Nantoni na oyifunayo ngokwenene, uya kuhlala unayo kuba unolwazi olunzulu malunga nendlela yokutsala okanye ukuyiphumeza.
Usomashishini waseMelika uJim Rohn uthe, Ungumndilili wabantu abahlanu ochitha ixesha elininzi kunye nabo. Oku kuthetha ukuba abantu abakungqongileyo bachonga indlela ocinga ngayo, oziva ngayo, owenza ngayo kwaye ekugqibeleni ubuphila njani ubomi bakho. Ngokwendalo ufunxa amandla kwaye ubonakalise iimpawu zabantu abakungqongileyo. Unokhetho lokwenza impumelelo kunye nolonwabo lwakho ngokuchitha ixesha nabantu abalungileyo abanokukunceda ukuba ufike kwinqanaba elilandelayo. Ukuba ungoyena ukrelekrele kwiqela lakho, kuya kufuneka uzikhuthaze njani ukuba ubengcono? Umntu wesizwe sakho ufunda kuwe, kodwa UFUNDA kubani?
Ukuze ube lolona hlobo luhle ngokwakho, kufuneka uqhubeke nokufunda, ukukhula, kunye nokuzabalazela okungcono. Njengesiqalo, unokufuna umntu okhuthazayo onamanyathelo ayi-10 phambi kwakho kwindawo onomdla kuyo. Isenokuba ngumntu opapashe iincwadi, iividiyo okanye iindibano zocweyo. Zigxininise kuzo. Funda, ubukele, kwaye ufunde kubo. Uba yinto ovelele kuyo.
Ke xa ubona i-911, lixesha lokuba uthathe inyathelo lokuqala kumjikelo olandelayo wobomi bakho. Ngubani oza kukunceda ube lolona hlobo luhle ngokwakho? Khumbula, uhambo lwakho lolwakho ukuhamba wedwa kwaye lulungiselelwe wena kuphela. Kukuwe ukuba ukhethe eyiphi indlela yakho kwaye ikhokelela phi. Isigqibo sakho siya kuseta indlela eya kwikamva lakho.
'Uyile nto ukhetha ukuba yiyo namhlanje. -Wayne Dyer (1940 - 2015)
Intsingiselo yesi-3 ka-911: Uthembela kwikamva lakho.
Ukubona i-911 ngumyalezo olungileyo ngenene, uhlala ekuxelela ukuba ulapho kanye apho ufuna ukuba khona ebomini. Konke okufuneka ukwenze kukuthemba indlela obuqhubeka ngayo ubomi bakho. Ihlabathi elikungqongileyo linokuba sisiphithiphithi, kodwa ngokuzithemba, uyazi ukuba ngumdlalo nje kwaye ukuyo. Uyaqonda ukuba ilizwe elibonakalayo lenziwe ngamandla kwaye unesimo sengqondo esitsha malunga noMhlaba wonke. Uyazi ukuba ungubani ngokwenene kwaye akukho nto inokukugungqisa. Nanini na xa ubona i-911 iphindaphindeka, umyalezo wakho kukuhlala unethemba kwaye unombulelo ngalo mzuzu kanye ebomini bakho, kuba ukuthembela kwakho kwikamva kukhokelela kwiintsikelelo kwindlela yakho. Le ntembeko ikuvumela ukuba ube namava amatsha avula intliziyo yakho kwinjongo ephezulu.
Uyathemba ukuba amava ngamanye ebomini bakho ngamava afanelekileyo kuwe. Into obuyifuna sele ilapha. UnguThixo omfunayo. Ngokuzithemba, uyabona ukuba nantoni na oyifunayo iyakuba yeyakho, kuba ukwazi kwakho okuphezulu-ikamva lakho-liyakuxhasa. Ukunxibelelana nekamva lakho, thulisa ingqondo yakho, cwaka, kwaye umamele ukuthula ngaphakathi.
Okukhona uthembela kwisikhokelo somphefumlo wakho ngaphakathi, kokukhona icacisa imiyalezo oya kuyifumana kwixesha elizayo. Ukhetho luhlala lukhona ukuthemba, kwaye ngale nto, awusoze usilele. Kodwa ukuthembela kwakho kuya kuvavanywa kaninzi. Kwaye xa ujongene nemiceli mngeni, awuvumeli uloyiko luphelise inkalipho yakho nangayiphi na indlela. Xa isibindi sokwenene kunye nentembelo iba yinxalenye yendalo yakho, kwaye imikhwa yokuzenzela ngokwakho ikhutshwa, ukulungele ukuya kwelinye inqanaba lokuqonda okuphezulu.
Qiniseka ukuba umphefumlo wakho unesicwangciso, kwaye nokuba awukwazi ukuwubona ngokupheleleyo, yazi ukuba yonke into iya kutyhileka njengoko kufanelekile. -U-Deepak Chopra
Intsingiselo yesi-4 ka-911: Ukulungele ukuBonakalisa.
Kwinombolo yokubala, i-911 yongeza kwinombolo ye-11 (9 + 1 + 1 = 11), kwaye iyancipha inombolo 2 (9 + 1 + 1 = 11 no 1 + 1 = 2), emele indlela onxibelelana ngayo nabanye kwinqanaba le-1-nge-1, kunye ukuhlala unyanisile kuwe.
I-11 yenziwe nge-1 ezimbini. Ngale ndlela, i-11 lisango elikusa kwinqanaba elilandelayo lobuyena bakho. Ukho kwikholamu yokukhanya kwaye le yile nombolo yenkosi ephakamisa ukuya kwinqanaba elilandelayo kwaye ikusondeza ekukhanyeni.
Inombolo ye-11 ikufundisa ukuba ubulawule njani ubomi bakho. Uya kuba namathuba okubonakalisa xa ubona i-911. Oku kuthetha ukuba uza kuvavanywa kunye nemiceli mngeni ukuze ukwazi ukunyaniseka kuwe kwaye ube nesibindi sokuthatha inyathelo kwicala elifanelekileyo lokulungileyo kwakho. Uya kufunda ukuba ungazingenela njani kuwe kwaye umamele intuition yakho ukukunceda ukukhokele kwindlela yakho yokubonisa injongo yomphefumlo wakho. Xa uhambelane nenjongo yomphefumlo wakho, ukubonakaliswa kwenzeka ngokulula.
Intsingiselo yesihlanu ye-911: Indawo yakho yokusebenzela yindawo yokuQeqesha ngokomoya.
NgokukaDoreen Virtue Ingelosi iNumeri 101 , Ukubona ingelosi inombolo 911 ngumyalezo wakho wobuthixo wokuhlala ulungile kwaye ujolise. Nokuba izinto zibonakala zingahambi ngendlela yakho, kubaluleke kakhulu ukuba ugcine isimo sengqondo esifanelekileyo ngokubhekisele kwimibono yokomoya esekwe kwimisebenzi yakho.
Ukuthatha inyathelo eliya phambili, awunyanzelekanga ukuba wahlule ubomi bakho bomsebenzi kunye nobomi bakho bokomoya. Ungazidibanisa zombini. Kananjalo, ubona indawo yakho yokusebenza njengendawo yoqeqesho lokomoya. Zonke iimpawu ofuna ukuzikhulisa ebomini bakho, njengomonde nobubele, zinokuvavanywa kweso sithuba. Uya kuba namathuba amaninzi okuziqhelanisa nokubonakalisa ezo mpawu. Ke nokuba ungaluhlobo luni lomsebenzi onawo, unokujongana nomsebenzi wakho njengendlela yokomoya.
Okukhona uziqonda ukuba ungubani kanye kanye, kokukhona uya konwaba ngakumbi emsebenzini nasekhaya. Ukukhulisa ubumoya bakho obukuvumela ukuba wenze unxibelelwano olunzulu nomphefumlo wakho yeyona ndlela ithe ngqo ethembekileyo yokufumana umsebenzi kunye nobomi.
Intsingiselo yesi-6 911: Yenza izigqibo ezihambelanayo neNjongo yakho.
Inombolo 911 inxulumene neNgelosi enkulu uTzaphkiel (Ulwazi lukaThixo) ongumgcini wobulumko nolwazi olungcwele. Olunye upelo lwegama likaTzaphkiel lubandakanya uJafkiel, Japhkiel, Zafkiel, Zafchial, Zaphchial, Zaphiel okanye Zelel. Ingelosi enkulu iTzaphkiel inceda ekukhuleni ngokomoya, ubulumko nokuqonda.
Xa ubona i-911, i-Tzaphkiel ikukhokela ukuba ube nesibindi sokwenza izigqibo ezihambelana nokuthanda kwakho kunye nenjongo yobomi, ekugqibeleni wenze umhlaba ube yindawo engcono.
NgokukaGustav Davidson's Isichazi-magama seeNgelosi: kubandakanya iingelosi eziwileyo , I-Archangel Tzaphkiel ikubukele xa ufuna ukwenza izigqibo ezibalulekileyo naxa kufuneka uzibeke kumagama ukuze abanye baqonde. Ukuba awuqinisekanga ngamagama, uTzaphkiel uya kukunceda wenze umyalezo ucace.
Intsingiselo yesi-7 ye 911: Ukuvuka kwakho ngokomoya kukhokelela kwiimpendulo.
Intsingiselo ye-9: 11 inokunxulunyaniswa nokuvuka ngokomoya. Uqala ukulahla i-mask mask kwi-self yakho yangempela. Kule nkqubo yokuphilisa, uvale izahluko ezindala ukuze ubhale ezintsha. Uyaqonda ukuba abantu ababi kunye namava adlulileyo akuncede ukuba ukhule ube kwesi sigaba sobomi bakho.
Kule nqanaba litsha lokwazisa, ufuna abantu kunye namava ahambelana kwaye uphakamise ukungcangcazela. Ngelixa sonke sidlala indima kule nkqubo yokuvuka, akukho nxaxheba ayibalulekanga kangako.
Jonga ngaphakathi iimpendulo ozifunayo. Xa uqaphela ukuba unakho ukufikelela kwinxalenye yakho eyaziyo into oyifunayo, ungayeka ukukhangela ngaphandle ngokwakho. Xa uthemba ubulumko obuhlala ngaphakathi kwakho, unokuzithemba ngobomi bakho. Ukuyo kanye apho ubumele ukuba ubekho kwaye usiya kwicala ekufanele ukuba uye kulo.
Xa ixesha lilungile, uya kuba nokuqonda okucacileyo kwendima yakho okanye injongo. Ngeempawu zengelosi kunye ne-synchronicities, uhlala ukhokelwa kwimishini yakho yobomi yonke imihla. Yithemba inkqubo kuba uhlala uncedwa.
zithetha ntoni ezingama-333
Yintoni omele uyenze ngokulandelayo xa ubona i-911?
Ekugqibeleni, intsingiselo ye-911 kunye nokubona i-9: 11 okuphindaphindayo sisikhumbuzo sokuba uyinyani. Ungumntu ongokobuthixo kwaye ngoku lixesha lokupha umhlaba ngeetalente zakho. Unganceda ukutshintsha kwaye uphakamise ukuqonda kweplanethi ngokuba ungubani kanye kanye.
Ushiya indawo yakho yokuthuthuzela kuba uyaqonda ukuba kufuneka uye phambili kwicala oya kulo, okanye ungabuyela kukhuseleko lweendlela ezindala. Uya kugqiba ufumane iziphumo ezifanayo ukuba uyaqhubeka nokwenza into oqhele ukuyenza. Ke ukuba ufuna ukubona utshintsho, qiniseka ukuba wenza into ebalulekileyo ngayo. Awusoze wazi de uzame.
Zithembe ekuqhubekeni nobomi bakho kunye nomsebenzi womphefumlo. Zijikeleze ngabantu abalungileyo kunye neemeko ezinokukunceda ukuba uye kwisahluko esilandelayo sobomi bakho. Ukuzama izinto ezintsha kunokukwenza ubonakalise iinkolelo zakho ezindala kwaye ubone iingxaki ngendlela entsha. Onke amava enzelwe wena, ke funda ukuthembela kuye ngamnye. Lo mkhwa wokuthembela rhoqo uya kukunceda ube sisiqu sakho sokwenyani.
Akukho nto eyenzekileyo ngengozi. Indima yakho yinxalenye yesicwangciso sendalo iphela kwaye kufuneka uthembele ekubeni yonke into iqhubeka ngokugqibeleleyo. Nxibelelana nelizwi entliziyweni yakho kwaye ufunde ukuthembela. Olu nxibelelaniso yindlela yakho eya enkululekweni .
Ukubona i-911 rhoqo kukuxelela ukuba ukulungele ukuba ungubani kanye kanye. Sisipho esifunwa lihlabathi kwaye akukho mntu unokuchaza ngcono iitalente zakho kunokuba unakho. Guqula ihlabathi libe ngcono. Into efunekayo kukuba uphume.
Lixesha lokuba yenza uphawu lwakho!
Into eNye ekufuneka usoloko uyenza xa uhlobisa igumbi lakho lokuhlala- kunye naLowo ungafanelekanga
Hlaziya ibhedi yakho Ngenye yezi Bhodi zeNtloko ziSitayile-Kwaye Zonke zingaphantsi kwe- $ 200
Amagumbi okuhlambela angenafestile: 9 awangabalulekanga konke konke (Kwaye ngoba!)
Iitafile zokuhlalisa zezona ndlela zilula zokongeza ukuKhangela okuLayekileyo kwigumbi lakho lokuhlala
Ithetha ntoni ingelosi engu-555
Ithetha ntoni i1234 ngokwasemoyeni